यसरी बन्छ तिहारलाई झिलिमिलि बनाउने दियो, हेर्नुहोस् १० तस्विर, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
यसरी बन्छ तिहारलाई झिलिमिलि बनाउने दियो, हेर्नुहोस् १० तस्विर
काठमाडौँ। हिन्दु धर्मावलम्वीहरुको पूजाआजाको समय तथा शुभ साइतका लागि बाल्ने गरिन्छ माटोको दियो। कालो माटोको प्रयोग गरेर बनाइने दियो विशेष गरेर भक्तपुर क्षेत्रमा पाइन्छ।
हिन्दुहरुको ठूलो चाड मध्येको एक तिहार नजिकिएसँगै अहिले त्यस क्षेत्रमा रहेका कुमालेहरुलाई दियो बनाउन भ्याईनभ्याई छ। अन्य समयको तुलनामा दशैं र तिहारमा दियो बढी खपत हुने भएकाले उनीहरु दियो बनाउन व्यस्त छन् अहिले।
अझ तिहारमा दियोको बढी प्रयोग हुने हुँदा कुमालेहरु दियो बढी मात्रामा बनाउने गर्छन्। त्यहाँ घुम्न आउने विदेशी पर्यटकहरु पनि माटोको भाडाहरु बनाएको देखेर दङ्ग पर्ने गर्छन्।
कतिपय विदेशीहरु त त्यो देखेर आफू पनि बनाउन तम्सिन्छन्। तर आजभोलि बजारमा इलेक्ट्रोनिक दियो पनि छ्याप्छ्याप्ती आउन थालेको छ। जसले गर्दा माटोबाट बनेका दियोको प्रयोग घट्दै गएको पाइन्छ।